Luqado badan oo dhanka telefoonka ah ayaa dadka lagu caawiyaa
Xarumaha caafimaadka waxaa ay mustaqbalka soo socda ku shaqayn doonaan qaab ballan qabsasho ah. Soo wac kahor inta aadan imaan xarunta caafimaadka. Waxaad heleysaa markii loo baahdo turjumis dhanka telefoonka oo luqaddaada kuu gaarka ah.
Lambarka guud ee qaabilsan arrimaha caabuqa ama infekshanka waa 09 839 50070. Astaamaha caabuqa waxaa ka mid ah qufac, hargab, dhuun-xanuun, qandho ama xummad, adkaanta neefsashada, shuban, calool-xanuun. Haddaad isaga shakisan tahay cudurka faafa ee feyruska korona, waxaad wacdaa telefoon lambarka qaabilaadda arrimaha caabuqa ama infekshanka.
Markaad wacdo telefoonka, kalkaalisada caafimaadka ayaa qiimayn ku samayn doonta xaaladdaada, haddii loo baahdo waxaa ay kuu qoraysaa shahaadada jirro ku maqanaanshaha, waxaa ay kuu gudbinaysaa dhakhtarka ama waxaa ay kuu direysaa baartitaanka korona.
Waxaan baaritaanka feyruska korona ka ballansan kartaa dhanka internetka linkiga ah Koronabotti.
Tallaalku waxaa uu si aad ah uga hortagayaa xanuunka cudurka feyruska korona. Tallaalku waa lacag la’aan. Ka ballanso waqtiga tallaalka telefoonka lambarkiisu yahay 09 58443030.
Tallaalku waa muhiim, xittaa haddii uu hore kuugu dhacay ama aad la xanuunsatay cudurka feyruska korona. Qofka uu ku dhacay cudurka feyruska waxaa ku filan hal qayb oo tallaalka ah, qiyaastii lix bilood kaddib marka uu cudurka la xanuunsaday.
Arrimaha kale ee dhanka caafimaadka la xiriira waxaa kala xiriiri kartaa xaruntaada caafimaadka
Xarumaha caafimaadka ee Hakunila iyo Länsimäki 09 8393 5928
Xarumaha caafimaadka ee Korso iyo Koivukylä 09 8393 5923
Xarunta caafimaadka ee Martinlaakso 09 8393 5924
Xarunta caafimaadka ee Myyrmäki 09 8393 5925
Xarunta caafimaadka ee Tikkurila 09 8393 5926
Qof walba oo naga mid ah howlqabadkiisa u gaarka ah ayuu ku yareyn karaa faafista cudurka safmarka ah ee feyruska korona.
Ka taxaddar nadaafadda caafimaadka ee gacmaha: gacmaha waxaad ku dhaqdaa biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 seken. Isticmaal mar walba jeermisdilaha (käsidesi).
Ha taataaban indhahaaga, sanka iyo afka, haddii markaas aad taabanayso aadan gacmahaaga soo dhiqin
Marka aad qufacayso ama aad hindhisayso, afkaaga dabool, tusaale ahaan isticmaal waraaqda sanka ama gacantaada dhinaca dheer ee shaarka ama jaakadda oo afka ku dabool.
Ka fogow dadka kale oo u jirso masaafadda ammaanka oo dhan 2 mitir.
Haddii aad dareento ama aad isku aragto astaamaha hargabka ama calool xanuunka, guriga joog.
Qaado afshareerka, haddii aysan suurtaggal ahayn kala fogaanshaha. Sidoo kale qaado afshareerka marka aad raacayso gaadiidka dadweynaha, ama aad joogto munaasabadaha iyo goobaha guud ee dadku isugu yimaadaan. Magaalada Vantaa ayaa waxaa sida uu ahaa go’aankii dowladda ay u qeybinaysaa afshareer lacag la’aan ah dadka hantida yar iyo kuwa tabarta daranba.
Waxaad telefoonkaaga ku soo degsan kartaa ablikeeshinka lacag la’aanta ah ee feyruska korona. Ablikeeshinku wuxuu kuu sheegayaa, haddii aad u dhawaatay ama ag joogtay qof xanuunku uu ku dhacay.
Akhri warbixintan dheeradka ah:
Haddii aad ka shakisan tahay in feyruska korona kugu dhacay
Xadeymaha iyo talosoojeedinnada
Saameynta ay xaaladda korona ku leedahay adeegyada Vantaa
Warbixin iyo hagis
Linkiyo faa’iido leh
Haddii aad ka shakisan tahay in uu kugu dhacay feyruska korona, astaamaha ku hayaana ay yihiin kuwa fudud ama khafiif ah, waxaad waqtiga ballanka saami qaadista u qabsan kartaa qaab elegtoroonig ahaan ah, adigoo galaaya barta internetka ee la yiraahdo adeegga koroonaboti. Adeegu wuxuu ku shaqeynayaa luqadaha finishka, iswidhishka iyo ingiriiska.
Hadii aad u baahan tahay caawimaad degdeg ah, Lambarka adeegga telefoonka ee xarumaha caafimaadka ee khadka korona waa 09 839 50070 (isniin-jimce, saacadda 8-18 iyo sabti-axad, saacadda 9–18). Wiikendhiga adeegga telefoonka ee xarumaha caafimaadka waxaa uu qabanayaa oo kaliya arrimaha la xiriira shakiga ah feyruska korona. Waxaa kaloo suurtaggal ah in khadka tekefoonka korona aad ku reebto farriinta ah codsiga dib u soo wicista. Kalkaalisada ayaa adeeggaas telefoonka inta uu socdo waxaa ay qiimeyn ku sameyneysaa xaaladdaada, haddii loo baahdana waxaa ay kuu direysaa baarista saamiga feyruska korona, ama waxaa ay kuu direysaa dhakhtarka jooga xarunta caafimaadka ee cudurka safmarka ah.
Barta qaadista saamiga feyruska korona ee Vantaa waxaa ay ku taallaa Varisto (Varistontie 1), waxaana ay barta saami qaadistu furan tahay maalin walba inta u dhexeysa saacadaha 8–16. Qaybta Varisto ka sokow, waxaa kaloo qaybaha saamiga baarista ah ka mid ah goobaha ay maamusho HUS, kuwaasoo ku yaaalla meelo kala duwan oo caasimadda iyo hareeraheeda ah. Marka aad ballanka qabsato waxaa laguu soo sheegayaa goobta saamiga lagaaga qaadi doono iyo cinwaanka saxda ah ee goobtaas.
Waa in la aadaa baaritaanka feyruska korona, si cudurkaan safmarka ah uusan u faafin. Waxaana haatan la heli karaa waqtiyo fiican oo saami qaadista ah, natiijadana si dhakhso ah ayay ku imaanaysaa. Waxaan dadka ku boorrinaynaa in ay qabsadaan ballanka baarista, xitaa haddii astaamaha hayaa ay yihiin kuwo fudud ama khafiif.
Bogagga internetka ee golaha dowladda waxaad ka heleysaa xadaymaha iyo talobixinta markaa taagan ee ku saabsan cudurka safmarka feyruska korona, kuwaasoo ku qoran luqadaha finishka, iswidhishka iyo ingiriiska.
Xadeymaha heerka gobol ee wali socda waxaad ka hubin kartaa bogagga internetka ee waaxda caafimaadka ee Helsinki iyo Uusimaa, kuwaasoo ku qoran luqadaha finishka, iswidhishka iyo ingiriiska.
Infofinland.fi- boggaan internetka waxaad si kooban uga heleysaa dhammaan xiriiriyayaasha ku saabsan warbixinaha ay soo baahiyeen howlwadeennada dowladda ee la xiriira feyruska korona iyo saamaynta uu ku yeeshay dalkan finland gudihiisa.
Telefoonka hagista ee Vantaa (tel. 09 8395 0070) waxaa loogu talaggalay dhammaan dadweynaha reer Vantaa, kuwaasoo ka fekeraaya ama raadinaaya in ay ogaadaan, sida uu feyruska korona saamaynta ugu yeelanaayo noloshooda caadiga ah iyo adeegyada magaalada. Lambarkaan telefoonka waxaa loogu adeegaa dadweynaha reer Vantaa maalmaha shaqada, saacadda 8–15.30. Luqadaha koowaad ee adeegga waa finish, iswidish iyo ingiriis. Sidoo kale wixii su’aal ah ee aad qabto waxaad ku soo diri kartaa iimeeylkaan korona@vantaa.fi, hadii soo wicitaanku uu kuu suurtagali waayo sababo jira awgood.
Hagista ku saabsan adeegyada magaalada Vaantaa iyo xaaladda aan caadiga ahayn, waxaad ku heleysaa dhanka telefoonka ama iimeylka, isniin-khamiis, saacadda 11–14.
Ruush, finish: Irina Savelova, t. 0400 842 353, irina.savelova@vantaa.fi
Istooniyaan, ruush iyo finish: Inge-Ly Rannu, p. 040 847 3203, ingely.rannu2@vantaa.fi
Soomaali, finish: Habiibo Mohamed, p. 050 302 4362, mohamed.habiibo@vantaa.fi
Mashruuca Tsempataan (Tsempataan-hanke) waxaa uu u fidinayaa dadweynaha reer Vantaa hagis ku baxeysa luqadaha kala duwan oo dhanka internetka ama adigoo jooga xarunta mashruuca talaada-jimce, saacadda 10–15.
Finish, ruush: Valeria Komina (Vantaan venäläinen klubi), tel. 044 948 9220 (WhatsApp, Viber), tsemppari@vvklubi.fi
Finish, carabi, faransiis: Abdul Lamghari (Hakunilan kansainvälinen yhdistys), tel. 044 493 2093 (WhatsApp), tsemppari@hakunila.org
Finish, soomaali: Saed Mohamed (Itä-Vantaan somalikulttuuri yhdistys), tel. 045 1447 821 (WhatsApp), saciidqeys@hotmail.com
Finish, Soomaali: Mubarak Osman (Sahan-seura), tel. 045 2681 100 (WhatsApp), tsemppari@sahanseura.net
Intaas waxaa dheer bogga fasybuugga ee mashruuca Tsempataan waxaa toddobaad walba lagu soo qoraa warbixin luqado kala duwan ku qoran oo kala ah finish, ruush, carabi iyo soomaali.
Ururka Järjestörinki ee Vantaa ayaa isaguna u fidiya dadka ajaanibta ah taageero ku saabsan xaaladaha kala duwan ee nolosha, waxaana adeeggaas uu ururku ka bixiyaa saddexda goobood ee hagista ee kala duwan.
Xarunta howlaha qaranka ee Leinikki, Leinikkitie 22 A. isniin iyo arbaca walba waxaa ay dadka siiyaan hagis ku baxaysa luqadaha carabiga, faransiiska, ruushka, jeejniya, inguushi, finish iyo ingiriis, saacadda 9–15. talaada iyo khamiis walba waxaa ay dadka siiyaan hagis ku baxaysa luqadaha carabiga, faransiiska, dari, faarisi, pashtuu, finish iyo ruushka, saacadda k9–15.
Samia Kbairi (carabi, faransiis, finish) tel. 050 330 6927 (sidoo kale WhatsApp-ka iyo Viber-ka)
Zara Makhieva (ruush, jeejniya, inguushi, finish) tel. 045 7834 8754 (sidoo kale WhatsApp-ka)
Ziaulhag Momeni (daari, faarasi, paashtuu, ruush, finish) tel. 045 134 1711 (sidoo kale WhatsApp-ka iyo Viber-ka)
Xarunta dadweynaha Myyrinki, Vaskivuorentie 10 B, dabaqa 3-aad. Hagis ku baxaysa luqadaha carabi, soomaali, ingiriis iyo finish, isinninta - khamiista saacadda 9.30–14.30. Hagis ku baxaysa luqadaha ruush iyo finish, isnnin, talaada iyo khamiis walba, saacadda 9–16 ja arbaco kasta saacadda 9–14.
Ruush, finish: Sergei Jernberg, p. 045 7875 8933, sergej.jernberg@vantaalla.info (isniin-Jimce, saacadda 9–15)
Ruush, finish: Irina Grönlund, p. 040 183 0930
Carabi, somali,ingiriis iyo finish: Alawi Abdalla, p. 0400 986 011
Xarunta dadweynaha Kafnetti, Rautkallionkatu 3. hagis ku baxaysa luqadaha dari, farsi, pashtuu, finish iyo ruushka, arbaco kasta saacadda 9–15.
Ziaulhag Momeni, p. 045 134 1711 (sidoo kale WhatsApp-ka), ziaulhag.momeni@vantaalla.info
Yle.fi: Fahamka Koronada
Feyruska korona (covid19) waa feyrus cusub, kaasoo keena caabuq ama infekshan degdeg ah oo ku dhaca hawomareenka. Astaamihiisa waxaa ay noqon karaan, qufac, dhuun-xanuun, qandho ama xummad, neefsashada oo adkaata, murqo-xanuun iyo madax-xanuun. Astaamahaas oo kaliya iyadoo lagu salaynaayo laguma ogaan karo, in waxa keena caabuqa ama infekshanka ku dhaca hawamareenka uu yahay feyruska korona ama in uu yahay feyrus ama bakteeriyo kaleba.
Telefoonka talosiinta ee heerka qaran t. 0295 535 535 iyo bogga ama qolka internetka ah ee sida tooska ah loogu sheekeysto (chatti), waxaad si guud ahaaneed uga heleysaa warbixinta ku saabsan feyruska korona maalmaha shaqada, saacadda 8-21- iyo sabti kasta saacadda 9-15. Adeegga waxaa marka ugu horreysa lagugu siinayaa luqadda finishka iyo hadba sida ugu suurtaggalsan luqadaha kale ee iswidishka iyo ingiriiska. Talosiintaan dhanka telefoonka ah lagama helaayo talosiinta ku saabsan dhanka caafimaadka, ama tilmaanbixin la xiriirta astaamaha xanuunka ee degdegga ah ee u baahan emerjensiga ama heeganka.